चामुण्डाका नागरिक भन्छन् : ‘अब छुवाछुत गर्दैनौँ’ - Paschimnepal.com
चामुण्डाका नागरिक भन्छन् : ‘अब छुवाछुत गर्दैनौँ’
चामुण्डा (दैलेख) । जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले बताएका छन । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको वडा १ मा छुवाछुत अन्त्यका लागि आयोजना गरिएको सहभोज कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन ।
‘हिजोका दिनमा चामुण्डाबाटै छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सुरु भएको थियो ।’ उनले भने, ‘अब चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाबाटै छुवाछुत अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ अबको कसैले दलितमा माथि विभेद गरेको पाइएमा कडा कानूनी कारवाही गरिने चेतावनी दिए ।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख लक्ष्मीकुमारी शाहले चामुण्डा भूगोल मिलेको र सभ्य नागरिकहरुको बसोबास भएको ठाउँमा जातीय विभेद, छाउपडीप्रथा लगायतका समस्या हुनु दुखदायी घटना भएको बताईन ।
कार्यक्रममा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगर कार्यापालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले जातीय छुवाछुतको युग समाप्त भईसको बताए । कोही कसैलेपनि जातिय र भेगियताको नाममा विभेद गरेमा पाइएमा कानूनी कारवाही गरिने उनले चेतावनी समेत दिए । ‘यो विज्ञान प्रविधिको युग हो ।’ विज्ञानले नै यस्ता प्रथा गर्नु हुदैपनि पुष्टी गरि सकेको छ । उनले भने, ‘छुवाछुतको युग कोलोज भईसकेको छ ।’ रुढीवादी परम्परा र सोचले कसैलाईपनि फाइदा नपु¥याउने उनको भनाई छ । जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका लागि नगरपालिका एक्लैबाट सम्भव नहुने भएकाले सबैको सहकार्यको खाँचो पर्ने उनले बताए ।
यसैगरी कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई नगर प्रमुख शाहीले प्रतिवद्धता खुवाएका छन । सहभागीहरुले ‘अब छुवाछुत गर्दैनाैँ, कसैले गरेपनि सहन्नाैँ ।’ विभेद गर्नेलाई घृणा गर्ने छाैँ ।’ भन्दै प्रतिद्धवता खुवाएका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वराज न्यौपानेले बालबालिकालाई विभेद गर्न लगाइएको घटना लज्जास्पद घटना बताए । उनले कारवाही गर्ने निकायको उपस्थितिलाई कमजोरी नठान्न विद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिए । बालबालिकानै भोली देशका कर्णदार भएकाले यस्ता गलत क्रियाकलापमा नलाग्न सु्झाव दिए ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका उप–प्रमुख ताराकुमारी शाहीले कोही कसैलेपनि जातीयताको नाममा विभेद गरेकामा न्यायीक समितिमा उजुरी गर्न आग्रह गरिन् । विभेद गर्ने कोही कसैलाईपनि नछाड्ने कानूनी कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिईन ।
हिमालय आधाभुत विद्यालय तीजडाडाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रंगबहादुर तारामी मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चावि नपा वडा नं. १ का वडाध्यक्ष रंगबहादुर तामाङ्ग, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष निरकबहादुर शाही, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पत्रकार अमर सुनार लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
गत महिना हिमालय आधारभूत विद्याललय तीजडाँडामा दलितले पकाएको नखाने भन्दै गैरदलित बालबालिकाले ताला लगाएको सम्वन्धमा विभेद हटाउन चामुण्डाको तीजडाँडास्ति विद्यालय प्रांगणमा सहभोज कार्यक्रममा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन २९, २०७४ 8:28:29 PM
Prevसुर्खेतका ३० प्रतिशत महिला घरमै जन्माउछन बच्चा
Nextविपन्नको रकमले मन्त्रालयको गोष्ठी